Lastest and Trustest News - Page 256 of 261 - Lastest and Trustest News
Lastest and Trustest News
နာကျင်နေသော အဖေတယောက်ရဲ့ ဖွင့်ဟချက်
July 1, 2019 July 1, 2019 - by admin admin - LeaveaComment
နေပြည်တော် ကလေးငယ် အဓမ္မမှု အတွက် တရားမျှတမှု တောင်း ဆိုကြသော ဆိုရှယ်မီဒီယာ ကန်ပိန်း စတစ်ကာ ပြီးခဲ့သည့် မေလက နေပြည်တော်တွင် အသက် ၃ နှစ် မပြည့်သေးသည့် မိန်းကလေး ငယ် တဦး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖမ်း ခံရမှု တခု ဖြစ်ပွားသွား ခဲ့သည်။ ယင်း လိင်အကြမ်း ဖက် ခံရမှု …
ကျနော့်အိမ်က ၆ထပ်တိုက်ရဲ့ ၄ လွှာမှာ။ အထပ်ရယ်အလွှာ ရယ်ကိုပြောရတာ အတော်ေ လး လက်ပေါက်ကပ် တယ်ဗျ။ မြေညီကိုထည့်မတွက် တာတွေရော ထည့်တွက်တာတွေေ ရာနဲ့ရှုပ်နေတာပါပဲ။ ဆိုလိုရင်းက အထပ်နိမ့်၊မြင့်ကိစ္စမ ဟုတ်ဘူး။ ကြောင်ချေးကိစ္စ။ ဟုတ်တယ် ကြောင်ချေး ကိစ္စ။ ဘယ်ကမှန်းမသိ တဲ့ကြောင်နှစ်ကောင်ဟာ တိုက်လှေခါးထဲ မှာ ချေးပါတယ်။ ၂၄ နာရီ အတွင်း ဘယ်သူမှန်းမသိ …
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက် ခံရသည့် ဗစ်တိုးရီးယား လေးအတွက် အမှုမှန်ေ ပါ်ေ ပါက်စေရန် Ultimated Trolling On group မှ memes ပြိုင် ပွဲလုပ်မည်။
ဟယ်လို ဟယ်လို ဟုတ်ကဲ့ ကြားဖြတ်လေး ပြောစရာ ရှိပါတယ် ခင်ဗျ. အားလုံး သိကြတဲ့အတိုင်း ဗစ်တိုးရီးယားလေး ရဲ့ ကိစ္စပါ. ဟုတ်ကဲ့ အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ေ စရေးအတွက် ကျနော်တို့ UTO gp လေးကလည်း ဝိုင်းဝန်းကူညီပေး ဖို့ ဆန္ဒရှိပါတယ် ခင်ဗျ. အခုအချိန်မှာ အားလုံးကလည်း ဒီသမီးလေး ရဲ့ အမှုကို အမှန်တရား ပေါ်ပေါက် …
“ရွှေပေါက္ကံက ကလေးမုဒိန်းမှုနဲ့ ပက်သတ်ပြီး သူမရဲ့ ခံစားချက်ကို ပြောပြလိုက်တဲ့ ပိုပို။”
လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းက ဖြစ်ပွားခဲ့ တဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သက်ငယ်မုဒိန်းမှုနဲ့ ပက်သတ်ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးက မိဘပြည် သူတွေ စိတ်မကောင်း ဖြစ်နေကြ တာပါ။ လူမဆန် တဲ့ လူတစ်ေ ယာက်ေ ကြာင့် အပြစ်မရှိတဲ့ ၁နှစ်ကျော် အရွယ် သမီးလေးကတော့ လက်ရှိမှာ အရွယ်နဲ့မလိုက် တဲ့ ဝေဒနာတွေကို ခံစားနေ ရပြီး ဆေးကုသမှု ခံနေရတာ …
အသက် ၂ နှစ်မပြည့်သေးသည့် ကလေးငယ် ကို အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့သည့် ကိုရင်ကြီး ကို ဖမ်းဆီး
အစ်ကိုဖြစ်သူနှင့်အတူ အိပ်ပျော်နေ သည့် ၁ နှစ် ၉ လအရွယ် မိန်းကလေး ငယ်ကို ခိုးယူပြီး အဓမ္မပြုကျင့် မှုဖြင့် ကိုရင်ကြီးတစ်ပါး ကို လူဝတ်လဲ၍ မြောက်ဥက္ကလာပ မြို့နယ်၊ ရွှေပေါက္ကံ နယ်မြေ ရဲစခန်းတွင် ရာဇသတ် ကြီး ပုဒ်မ ၃၇၆/၃၆၃ ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူ ထားကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ထံမှ သိရသည်။ ခိုးယူခံရသည့် …
Previous 1 … 255 256 257 … 261 Next
လေးမျက်နှာမြို့ရှိ စတုမုခထူပါရုံ စေတီတော်ကြီးမှာ ငဝန်မြစ်ရေတိုက် စားမှုကြောင့် ပြိုကျမည့်ဘေးဖြင့် ရင်ဆိုင်နေရ သဖြင့် အမြန်ဆုံးပြုပြင်ပေးရန် ဆရာေ တာ် ကြီးများနှင့် ဂေါပကအဖွဲ့က နိုင်ငံတော် သမ္မတနှင့် နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံထံ တင်ပြတောင်း ဆို
November 15, 2019 November 15, 2019 - by admin admin - LeaveaComment
လေးမျက်နှာမြို့တွင် အနော်ရထာမင်း တည်ထားခဲ့သည်ဟုဆိုသော စတုမုခထူပါရုံ စေတီတော်ကြီးမှာ ငဝန်မြစ်ရေ တိုက် စားမှုကြောင့် ဘုရားတန်ဆောင်းများ အုတ်လှေကားများ အကာအရံများ ဆက်တိုက်ပြိုကျနေ ပြီး စေတီတော် ကြီးပါ ပြိုကျမည့်ဘေးဖြင့် ရင်ဆိုင်လာရေ သာကြောင့် အမြန်ဆုံး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပေး ပါရန် ဆရာတော်ကြီးများနှင့် ဂေါပကအဖွဲ့က နိုင်ငံတော် သမ္မတနှင့် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် တို့ထံ တင်ပြတောင်းဆိုခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိ သည်။ …
AA ခေါင်းဆောင်၏ ညီမဖြစ်သူနှင့် ယောက်ဖဖြစ်သူ ကို ရုံးထုတ်
ယခုနှစ် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ ကျောင်းသားေ ကျာင်း သူ ၁,၁၀၀ ကျော်ဝင်ခွင့်ရ
ခန္တီးမြို့နယ်အတွင်း ပိုင်ရှင်မဲ့ဖမ်းဆီး ရမိသော တရားမ ဝင် ရွှေတူးဖော်သည့် ပစ္စည်း ကိရိယာများ လေလံတင် ရောင်းချ
တရုတ်တက္ကသိုလ်ထဲက သွားလေသူ လူပုဂ္ဂိုလ်များ
Copyright © 2019 Lastest and Trustest News.